कोरोना भ्याक्सिन अनुदानमा त्यो पनि सम्बन्ध चिसिएको बेला –
आजको मिति: २०७८ बैशाख ७, मंगलवार
दुर्घटना / अपराध
कोरोना भ्याक्सिन अनुदानमा त्यो पनि सम्बन्ध चिसिएको बेला
२०७७ माघ ९, शुक्रबार , ०५:३३ मा प्रकाशित
भरत बहादुर बिष्ट /
आज देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,संघात्मक राज्य प्रणाली त्यो पनि जनताको मतबाट अनुमोदित पनि भैसकेको छ । संविधानसभाले निर्माण गरेको एकथान लिखित संविधान पनि छ । नवनिर्मित संविधान लचिलो छ, राष्ट्रियता देशको अखण्डता बाहेकका सबै धारा उपधारा आम सहमति अर्थात जनताबाट निर्वाचित संसदको दुई तिहाइ मतबाट परिवर्तन गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले जनता नै यो देशका मालिक हुन , सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने कुरा स्पष्ट सुनिश्चितता गरेको छ । जनताले चाहेको अबस्थामा असहमति विरोध जुलुस नाराबाजी आन्दोलन गर्ने सक्ने लोकतान्त्रिक अधिकार पनि त्यो संविधानले सुरक्षीत गरेको छ । आज त्यहीँ संविधान मिच्ने ? नेपाली जनताको उपलब्धि भनेकै उधारो संविधान थियोे । यो संविधान सर्वस्विकार्य सर्व उत्कृष्ट भन्ने होईन थिएन । संविधान निर्माताको सिङ्गो संविधानसभालाई ओझेलमा पारेको कुरा छर्लङ्ग थियोे ।
आज उक्त संविधानको मर्म अनुसार तीन तहका जन निर्वाचित सरकार छन् । संविधान कार्यनयन पनि ती तिनै तहका जननिर्वाचित सरकारको काँधमा छ । आज संविधान सभाले संविधान बनाएको पाँच वर्ष बित्न थाल्यो । संविधान अनुरुप संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउने भन्दा कमजोर बनाउनेतर्फ उन्मुख देखिन्छ । संविधानसंग सम्बन्धित कानून पनि नबनेको स्थितिमा आज मुलुक छ । अरु त के भन्ने एक पार्टीको तिनै तहका सरकार भएपनि एक अर्कासंग समन्वय पनि छैन । पार्टी एकीकरणको नाममा देशलाई बन्धक बनायो ।
संविधानको सफल कार्यनयनका लागि संविधानको अधीनमा रहेको कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो गरिएन बरु गुटबन्दीको शिकार बनाइयो । आवस्यक कानूनको कमीका कारण संविधान कार्यनयन हुन सक्दैन थियोे । यसैमा मिच्ने कुरा कति हदसम्मको गैरलोकतान्त्रिक गैरजिम्मेवारी होला सजिलोसँग अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाली जनताले यो काम सम्पन्न गर्नका लागि भारी बहुमतका साथ सहज काम गर्न सजिलो हुने गरि तत्कालीन गठबन्धन अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डबललाई यो अभिभारा सुम्पेका थिए । तर अहिलेसम्म सरकार असफल देखिन्छ । छिन्नभिन्न कठै दया लाग्छ ।
एकल पार्टीको सुबिधा जनक बहुमत तिनै तहका सरकार संचालन गर्ने पुर्णतः एकल पार्टीको राज चलिरहेको थियोे । हुँदा खाँदाको दुईतिहाइको बहुमत निमिट्यान्न घाँटी निमेठेर हत्या गरिएको देखिन्छ ।आज ती सरकार कर्तव्य विमुख भएका आफ्नै दलीय भागबन्डामा रूमलिएको अल्झिएको समय त्यसै खेर गएको देखिन्छ । सानोतिनो कुरामा ठूलै हंङ्गामा मच्चाउने जयजयकार गरिदिनुपर्छ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित देखिन्छ । बहुमतको महत्त्व राम्रो काम गर्ने सुनौलो अवसर हो थियोे । आफ्नो पल्ला भारी गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो आज चकनाचुर भएर गयो ।
पाँच वर्षको लागि जनताले त्यो अभिभारा सुम्पेको हो भन्ने ख्याल् नै नगरी चिरकाल सम्म हामी नै सरकार चलाउने ठेक्का पाएको, लिजमा पाएको जस्तो हर्कत देखिन्छ । यो सत्तारुढ दलको महाभूल थियोे । आज जनताको जीवन स्तर यो संविधान, सरकार आउनु भन्दा पहिलेको भन्दा खस्केको देखिन्छ । जनता आज रोग र भोकबाट आजित छन । के खाऔ के लगाउने भन्ने चिन्तामा छन् । देशमा बेरोजगारी बढेको छ । कोरोनाको उपचार छैन । भ्यक्सिन भारतले अनुदानमा दिएर जनताको उपचार गर्नुपर्ने अनि ५० अरब खर्च चाहिने चुनाव कसरी होला गर्लान् ? आवधिक निर्वाचन त बाध्यता नै भयो कोभिड महाब्याधी कालमा मध्यावधि निर्वाचन कस्तो विडम्बना है ।
जलवायु परिवर्तनको कारण परम्परागत व्यावसाय कृषीमा कमिआइ देशमा भोकमरीको स्थिति छ। एक छाक काटन टार्न कै लागि जसको कारण आज लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन् विवश छन् । युग परिवर्तन भयो । देशको प्रणाली परिवर्तन भए सरकार परिवर्तन भए । कोहि मन्त्री भए कोहि माननीय भए तिनको जीवनमा ठूलै परिवर्तन आएको होला तर जनताका दुख जहाँको त्यहीँ झन् दयनीय अझै दुरुस्त उस्तै छन् । आज उल्टै भएनभएको कानून बनाउने दुस्खमा जनतालाई दुस्ख दिने निहेतका साथ राज्य अघि बढेको पो देखिन्छ । कस्तो परिवर्तन ल्याएको होला ?
नेपालीलाई कानून होईन काम चाहियो, चुनाव होइन विकास चाहिएको हो । कानून त यो देशका भ्रष्टाचारी घुसखुरी, कमिसन खाने, दलाल, देश नै बेच्न खोज्नेहरुलाइ चाहिएको हो । नकि लाज लुकाउन धोतीको कमि हुनेलाइ,भोक मेटाउन धौधौ हुनेको लागि कति कडा कानून बनाउने हो सरकार ? किसानलाई उखुको पैसा नदिनेलाई कानून चाहिएको हो कि ? वर्षौं देखि आफ्नो उखुको पैसा नपाएर आन्दोलन गर्नेलाई दबाउन ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को उपलब्धि यहीँ हो ? दुईतिहाइ सरकारले आज आम निर्वाचन भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि सकारात्मक कुरा समतामूलक समाज निर्माण आर्थिकसामाजिक समृद्धिको र आधुनिक नेपालीको खाका खै त ? के मध्यावधि निर्वाचन हो ?
प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन भन्ने गुनासो मात्रै होईन यसैको झोकमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो । त्यो संसदले जन्माएको सरकार यस्तो हुँदै गर्दा त्यो संसद विघटन गर्दा नेपाली जनतालाई त्यस्तो तात्किक केही पर्दैन । त्यसले बनाएको सरकार यस्तो भने तिनीहरुले बनाएको विधेयक कानून कस्तो होला ? बनाएका कानून संसदीय दल संसदका विषयगत समितिले दिएको निर्देश र सांसदहरूले सार्वजनिक महत्त्व र आफ्नो क्षेत्रका जनताको दुस्खकष्ट विकास निर्माणका सवालमा उठाएका जनजीवनका जल्दाबल्दा समस्या कहिले सरकारले सुन्यो र समाधान भए ?
सांसदहरू सुविधा भोगी भए । राजधानीमा घर भएकाले पनि घरभाडा बुझे । विभिन्न सेवासुबिधा लिने राज्यकोष दुरुपयोग भएको जनगुनासो व्यापक देखिन्छ । तर पनि जनताको जनप्रतिनिधि मुलक संस्था हो, यसको समयावधि पूरा हुनुपर्छ भन्ने जनताको स्पष्ट राय हो । बरू सांसदहरूले जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ, सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाइनुपर्छ भन्ने हो । जनताप्रति उत्तरदायी नहुने सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नहुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन थियोे ? आफ्नो पार्टीको बहुमत छ भनेर सरकार एकाङ्की भएर एकात्मक सोचाइको दुस्परिणामको उपज आज देशले भोग्दै छ।
लेखकः टीकापुर–१ का वासिन्दा हुनुहुन्छ । उहाँले बिभिन्न बिषयवस्तु बारे बिभिन्न स्थानिय सञ्चारमाध्यममा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ ।
भारतको राजधानी दिल्लीमा एक साता लकडाउन घोषणा
भारतमा एकैदिन थपिए २ लाख ७३ हजार बढी कोरोना संक्रमित
टीकापुरमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुदाँ एक जनाको मृत्यु, एक गम्भिर घाइते
प्राज्ञिक समाजद्वारा पत्रकार चौधरीसहित ४ जना डा. सम्मानित
टीकापुरमा मोटरसाईकल दुर्घ...
प्राज्ञिक समाजद्वारा पत्र...
सहरी क्षेत्रका विद्यालय व...
टीकापुर सुनचाँदी व्यवसायी...
टीकापुरबाट विप्लवका तिन क...
भारतको राजधानी दिल्लीमा ए...
ढुंगाना परिवारद्वारा मेरी...
कैलालीमा पनि आंशिक निषेधा...
बृद्धको पानीमा डुबेर मृत्...
भारतमा एकैदिन थपिए २ लाख...
Prevपछाडीटीकापुरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गोष्ठी सम्पन्न
अगाडीविप्लवद्धारा भोलि नेपाल बन्द घोषणाNext
सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण हाम्रो दायित्व
प्रवन्ध निर्देशक :- दिपेन्द्र राज भण्डारी
अध्यक्ष :- धनसिंह साउँद
सम्पादक :- हेमराज खनाल
सम्पर्क :091-561235, 9858427600,9848429767, 9804600600
ठेगाना: टिकापुर नगरपालिका वडा न: १ ब्लक न:१४ , कैलाली
© 2020 All Right Reserved. Powered by